ULora zombie umzobi wee-unicorn zemilingo ezimibalabala | Izidalwa ezikwi-Intanethi
ULora Zombie umzobi wee-unicorn ezinemibala enemibala othe wamangalisa umhlaba ngetalente yakhe enkulu xa wayesenza imisebenzi yemizobo edibanisa zonke iintlobo zobuchule. Akukho qeqesho lwezifundo kodwa nge intelekelelo enkulu kunye nobuchule beendlela zeplastiki zikwazile ukwenza isitayile esikhethekileyo esilandelwa zizigidi zabalandeli kwihlabathi liphela.
Echaphazelwe sisimbo somyili weqela lomculo uGorillaz Jamie Hewlett, ilawula ukudala imihlaba yomlingo ephenjelelwe yi Ukuhamba kweGrunnge. Isitayela esiqhelekileyo, ukusekwa okuchaseneyo, ukugxeka, ukugqithisa kunye nokugcwele umbala. Igcisa elipheleleyo eliqale kwelona liphantsi laba yinto yemithombo yeendaba nokuba ifikelele yenza owakho umgca wempahla. Fumanisa uLora kunye nesitayile sakhe somlingo.
Imvelaphi yaseRussia ezelwe kwi1990 kwaye ngaphandle koqeqesho, U-Lora Zombie ukwazile ukukrola indawo kubugcisa bokubulela kwisitayile sakhe esikhethekileyo apho idibanisa ukugxekwa kwezentlalo kunye nehlabathi elithelekisayo eligcwele umbala. Uhlobo lwakhe lujolise kwi Ukuhamba kwe-grungeNgamazwi akhe, isitayile sakhe ngu "Grunge art". Intshukumo yeGunge yavela njengenkcubeko yolutsha kwi-90s ngohlobo lomculo olwaluza kumela amagcisa aphambili ngelo xesha. A ulwalamano oluchasene nentengiso kunye nenkcubeko, I-Grunge yale yonke into echazwe ngurhulumente njengesiqhelo kwaye yafuna ukuba yinto eyahlukileyo. Le ndlela yindlela kaLora, ukungakhathali, ukungcola, i-surreal, ukugxeka kwaye ugcwele umbala uhlala ubonakalisa iingcinga zehlabathi zehlabathi kunye neemeko ezichasayo.
Su indlela yokusebenza kuxubekile kukwazi Hlanganisa i-watercolor, ipensile, inki, ioli nazo zonke iintlobo zobuchule beplastiki obukhokelela kwiziphumo eziqaqambileyo kunye nemibala egcwalisiweyo. Sibona indlela asebenzisa ngayo imisebenzi yakhe iisimboli ezimele umbono wokubhabha, ukubaleka kwaye ukhululeke. Kwifoto engasentla sibona ukuba umntwana uyikhafula njani yonke iminqweno yokubhabha, ukubaleka kwaye akhululeke ngokupheleleyo, egcwele umbala.
Isimbo sakhe asinakufumaneka kuphela kwisicwangciso se-2D kodwa nakwiiprojekthi zobuqu njengezinye Iithoyi ezingama-3d ukuba ibeke kwimarike. Kule vidiyo sinokubona indlela isitayile esicocekileyo, esinemibala kunye esidlamkileyo salo mculi sikubona ngayo ukukhanya ngendlela eyahlukileyo.
La Ukuphefumlelwa ULora Zombie nguye umculo we-grunge, la política nazo zonke iintlobo zeemeko eziqhelekileyo ezinje uthando, inkululeko, uloyiko… Njl njl. Eyona nto iphambili kuye isalathiso sobugcisa wayengumyili weqela Gorillaz UJamie Hewlett, lo mculi umncedile wafezekisa isitayile sakhe somzobo.
Amaxesha amaninzi, eli gcisa laseRussia lihlala lisebenzisa iifayile ze nomphakathi ngenjongo yabelana ngomsebenzi wakho ngendlela yokwenyani, Okwangoku wenza imiboniso bhanyabhanya kwiinethiwekhi ezahlukeneyo ngelixa esenza uhlobo oluthile lweeprojekthi ukufikelela kubalandeli bakhe ngendlela yobuqu. Ukubonisa ubugcisa bakho bukhoma ngenxa yenethiwekhi yoluntu sisixhobo esinamandla kakhulu ekungafuneki ukuba umculi ashiye ngaphandle.
Kule minyaka ikwazile ukufumana indawo kwihlabathi lobugcisa, ekwazi ukuthatha inxaxheba kuyo imiboniso ehlabathini lonkeUkusuka e-Canada, e-United States, ukuya kwilizwe lakowabo i-Russia, mininzi imiboniso ayenzileyo. Kumboniso ngamnye uhlala esenza imiboniso bhanyabhanya ukufikelela kwinani elikhulu labalandeli kuthungelwano lwentlalo.
Okwangoku uLora nikela ngemisebenzi yakho yemifanekiso kumaphepha akho obuqu ukuvumela abasebenzisi ukuba bathenge imathiriyeli yoqobo esayinwe yiyo. Ixesha elifutshane kakhulu linayo eyakhe impahla eqinile apho akwazi ukudibanisa enye ifashoni kunye nesitayile sakhe esimangalisayo.
Ukudala, ukuthanda, ukucinga, ukugxeka Kwaye ngetalente ezalwa nayo, uLora Zombie ngumculi weentsuku zethu omele ukusebenza njengomzekelo wesalathiso sobuchule kwiiprojekthi zethu ezizayo. Yiba nombono, ube nephupha, kwaye ufumane iindlela zokubeka konke ephepheni.
Ungazibona iinethiwekhi zazo zentlalo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » ULora zombie umzobi wee-unicorn ezinemibala enemilingo
Ndiyasithanda isimbo sakhe!
Ewe ! unesitayile esinemibala egqamileyo kunye nentelekelelo.
Ungayithanda enye igcisa, ingakumbi malunga neefotomontages kodwa inezinto ezininzi zokuyila.